Accueil > Gazetin'ny nosy > Rajaonah Andrianjaka: « Hiposaka ny mazava atsinanan’ny vahoaka malagasy raha … »
Rajaonah Andrianjaka: « Hiposaka ny mazava atsinanan’ny vahoaka malagasy raha … »
Isan’ny fanapahan-kevitry ny fikambanana Otrikafo ny handrotsaka olona hofidiana filohampirenena amin’ny taona 2018. Nandritry ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety omaly no nanambaran’izy ireo an’izany. Tao anatin’ny famelabelarana nataon’ny mpitarika ny Otrikafo, Rajaonah Andrianjaka no namaritany fa « tonga ny fotoana ankehitriny hiarahan’ny Malagasy 20 tapitrisa Tia tanindrazana mientana ho fanavotana an’ity firenentsika ity ». Manokatra ny mason’ny mpiray tanindrazana izahay Otrikafo, hoy izy, fa hiposaka ho antsika ny « Mazava atsinanana » raha miara-miombom-peo sy mampiray fomba fijery isika ka hiala amin’ny lalana nahazatra hatrizay, izay nitera-pahasahiranana sy fahantrana lalina ho antsika rehetra. Ny fifidianana filohampirenena amin’io taona ho avy io no dingana hirosoantsika ho amin’izany, hoy ihany ny mpitarika ny Otrikafo, ka ny foto-kevitra ifakan’ny fifamatoran’ny vahoaka malagasy tia tanindrazana dia ny fialana amin’ny fitrosana any ivelany fa ny fianteherana amin’ny vola sy harena misy eto, ary ny fiaraha-mientan’ny malagasy amin’ny lafivalon’i Madagasikara ho amin’izany. Izahay Otrikafo dia resy lahatra, hoy Rajaonah Andrianjaka, fa mitovy fahatsapana aminay ny 90% amin’ny vahoaka malagasy, ka ndeha hifamondron-kery hialana amin’izao teti-pampahantrana efa nangejana antsika malagasy nandritra ny 120 taona mahery izao.
Ampy izay 57 taona nampiziogaina fahantrana ny vahoaka malagasy izay, hoy izy, fa fotoana izao mba hisitrahan’ny vahoaka amin’izay ny tombontsoa rehetra eto. Raha mbola miankin-doha amin’ny fitrosana vola any ivelany anefa isika, hoy hatrany Rajoanah Andrianjaka, izany hoe mbola manome fitokisana an’ireo sokajin’ny mpanao politika miankin-doha amin’ny fitrosam-bola any ivelany, dia hihalalina hatrany ny fahantrantsika sy ny fahasahiranantsika, ary na ny taranantsika aza tsy hahita mangirana eto amin’ity tanindrazantsika nomen-janahary antsika miaraka amin’ny harembe tsy hita nonoa eto ity.
Tsy nohadinoiny ny nanamarika fa « hatramin’ireo Nosy malagasy » (Iles Eparses) no tsy maintsy ezahintsika vahoaka malagasy ny mamerina azy ho antsika malagasy satria isan’ny lafin-tanin’i Madagasikara ireo ary efa nankatoavin’ny Firenena Mikambana hatramin’ny 1979, fa ny mpitondra fanjakana malagasy nifandimby teto no nanaiky hohitsakitsahin’ny mpitondra fanjakana frantsay.